यौन जीवन रोमाञ्चक बनाउने ७ टिप्सहरु onlinedarpan.com
Friday 24th of September 2021 / 01:36:12 PM
अनलाइन दर्पण 2019-10-17
हरेक दम्पतिको बैवाहिक सम्वन्ध सफल बनाउन यौन जीवनको पनि ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ । अधिकांश मानिस यौन चिकित्सकलाई दुई प्रश्न सोध्ने गर्छन् । पहिलो – यौन जीवनलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ ? अर्को – कसरी लामो समयसम्म यौन सम्पर्क कायम राख्न अथवा उत्तेजित रहन सकिन्छ ? यौन जीवन रोमाञ्चक बनाउने ७ टिप्सहरु निम्न अनुसार छन् ।
१. बेलुकीको खाना खाने बितिक्कै यौन सम्पर्क नगर्नुहोस्
प्राय: नेपालीहरुको के बानी छ भने बेलुकी ढिला खाना खायो एक आधा घन्टा टिभी हेर्यो अनि आफ्नो पार्टनरसंग बेडमा गयो सेक्सुअल क्रियाकलापमा संलग्न भयो । तर बास्तवमा कम्तिमा पनि खाना खाएको २ घन्टापछि सेक्स गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरु बताउछन । त्यसमा पनि बेलुकीको खाना धेरै ढिला खाने गर्नाले तपाईंको तौल मात्र बढ्ने होइन कि तपाईंको सेक्स लाइफलाई नै डामाडोल बनाउने बिज्ञहरु बताउदछन । बेलुकीको खाना थोरै, हलुका र स्वस्थकर हुनु जरुरी छ । तसर्थ बेलुकीको खाना छिटै खानुस अनि खाना खाएको दुई घण्टापछि मात्र पार्टनरसँग बेडमा जाने तरखर गर्नुहोस तपाइको यौन जीवन तपाइले सोचे भन्दा बढी रोमान्चक र स्वस्थकर हुनेछ ।
२. पोर्न फिल्मको नक्कल गर्नतिर नलाग्नुहोस्
आफ्नो पार्टनरसँग बेडमा केहि वाइल्ड गर्नु भनेको राम्रै हो तर त्यसलाई साँचो र प्राकृतिक बनाउन पनि निकै जरुरी छ । पोर्न फिल्मले तपाईंलाई धेरै आशा गर्ने बानी बसालिदिन्छ । आफूले कुनै फिल्ममा सेक्सुयल र सिडक्सन कार्यहरु देखेकै भरमा र त्यसको नक्कल गरेकै भरमा यसले तपाईंको पार्टनरलाई सन्तुष्टि दिन्छ भन्ने छैन। सेक्सको भरिपूर्ण आनन्द लिन पोर्न फिल्म हेरेर त्यसको कलाकार बन्ने कोशिष गर्नुभन्दा पनि आफ्नै शैली प्रयोग गर्नुहोस् । दिनदिनै आत्मियताका लागि गरिने कार्यहरु जस्तै एक अर्कामा आत्मियताका साथ चूम्वन गर्ने अंगालोमा बेर्ने जस्ता कार्य गर्नुस तपाइको यौन जीवन तपाइले सोचे भन्दा रमाइलो हुन्छ ।
३. सुत्ने बेलामा समाचार नपढ्नुहोस्
हामीलाई चाहिने सबै खबर, समाचार जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला उपलब्ध गराउने एक्काइसौँ शतिाब्दिको उपकरणलाई हामीले धन्यबाद दिनै पर्छ । यति सहज उपलब्ध हुने कुराहरुलाई हामीले किन दिनको अन्त्यमा खोज खबर गर्ने रु सुत्ने बेलामा अपराध, सेयर मार्केटको उतार–चढाव, प्राकृतिक प्रकोपका समाचारहरु मोबाइल, टिभी अथवा अनलाईनमा पढ्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको दिमागमा तनाव पैदा गर्छ जसले बेडमा सेक्सी फिल गर्न अलि गाह्रो हुन्छ । तनावले टेस्टोस्टेरोन लेभल घटाउँछ जसले तपाईंलाई सेक्समा मन नगएको महसुस गराउँछ । यसका साथसाथै ल्यापटप र मोबाइलमा ध्यान दिनु भनेको आफ्नो पार्टनरमा मन नजानु हो । सुत्नुभन्दा पहिले इन्टरनेटमा ब्राउजिङ्ग गर्नुभन्दा मनतातो पानीले नुहाउनु अथवा रोमान्टिक गीतहरु सुन्दा राम्रो हुन्छ । सुत्नुपूर्व आफ्नो पार्टनरसँग कुरा गर्ने बानी बसाल्नु भयो भने पनि यसले एकअर्कामा राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग गर्दछ ।
४. सेक्स ड्राइभलाई प्रभाव पार्ने औषधी सेवन नगर्नुहोस्
के तपाईं टाउको दुख्नासाथ औषधी खाने गर्नुहुन्छ ? सर्वेक्षणका अनुसार हाइ ब्लड प्रेसर, पिल्स र अरु साधारण औषधीहरुले सेक्सुयल डिजायर कम गर्ने गर्दछन् र टेस्टोस्टेरोन लेभल पनि घटाउने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस डाक्टरले तपाइलाइ यसको वैकल्पीक उपायहरु बताउने गर्दछन् ।
५ अधिक व्यायाम नगर्नुहोस्
अनुसन्धानका अनुसार निरन्तरको व्यायामले तपाईंको सेक्स लाइफमा रौनकता थप्ने कामका साथसाथै कार्डियोभास्कुलरको काम र सर्कुलेसन पनि बढाउने कार्य गर्दछ । व्यायामको लागि जिममा जानुस् अथवा आफ्नो बगैँचा वा अपार्टमेन्टमा डुल्नु भयो भने पनि यसले तपाईंलाई तनावबाट मुक्ति दिएर सेक्सको लागि मुड अन नै राख्न मद्दत गर्छ । तर, अधिक व्यायाम पनि हानि हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्नुहोस् ।
६. तालिका बिग्रने गरि नसुत्नुहोस्
हामी नेपालीहरु जो कार्यालयमा काम गर्दछौ वा साताभरी नै व्यस्त रहन्छौ हामी मध्ये धेरैजसोमा बानी नै परिरहेको हुन्छ कि बिदाको दिन आयो कि टन्न सुन्ने । यस्तै सोच हाम्रो दिमागमा हप्ताभरी नै आइरहेको हुन्छ । तर यो हाम्रो शारिरिक एवं यौन स्वास्थ्य दुवैको लागि हानिकारक हुन्छ । यसरि हप्ताभरीको सबै निन्द्रा पुराउछु भनेर धेरैबेरसम्म सुतिरहनाले पनि तपाईंको सेक्स मुड शिथिल हुनपुग्छ । यसरि धेरैबेर सुत्नाले प्राकृतिक साइकलमा हानी पुग्ने भएका कारण तपाईंलाई अल्छी, शिथिल र सेक्सका लागि मुड नै नहुने समस्यामा पर्नुहुनेछ । त्यसैले बिदाका दिनमा पनि अरु समयमा जतिबेला उठ्नुहुन्थ्यो त्यहि समयमा नै उठ्ने प्रयास गर्नुहोस् र त्यहि बानी बसाल्नुहोस् ।
७. २४ सै घण्टा पाटनरको वरिपरि घुमी नरहनुहोस्
नेपालीमा एउटा उखान छ चिनी पनि बढी खायो भने टर्रो हुन्छ । सेक्स लाइफ र यौन सम्वन्धमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । यदि तपाईं र तपाईंको पार्टनर एउटै अफिसमा काम गर्नुहुन्छ र अफिसबाट सँगै घर जानुहुन्छ भने केहि समयपछि तपाईंलाई वाक्क लाग्न सक्छ । यसरि २४ सै घन्टा एकअर्काको साथ मात्र हुदा क्युरोसिटी भन्ने कुरा नै हुन्न । जसले गर्दा तपाइलाइ आफ्नो पार्टनरसँग सेक्सुयल इन्टिमेसी जगाउन समय लाग्दछ । तपाइ वास्तवमै आफ्नो पार्टनरमा सेक्सुअल इन्टिमेसी जगाउन चाहनुहुन्छ भने यस्तो बेलामा केहि समयको लागि एकअर्काबाट टाढा रहनुहोस । केहि समय टाढिएर नजिकीदाको भेटघाट र सम्पर्क स्मरणीय बन्न पुग्दछ ।
जाडोमा यौन सम्पर्क गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, होस् गुमाए खतरा
याै’न जीवन खुसी राख्न जान्नैपर्ने कुरा !
महिनावारीका बेला यौन सम्पर्क कति उचित ?
यी हुन् श्रीमान श्रीमतीले शारीरिक सम्बन्ध राख्न नहुने दिनहरु
पुरूषमा भन्दा महिलामा किन वढी यौन चाहाना हुन्छ ? यस्ता छन् कारणहरु
काठमाडौमा बस्ने दोलखाली एमालेको भेला सम्पन्न
एकीकृत समाजवादी भक्तपुरको अध्यक्षमा श्याम बस्नेत
एनआरएनए उपाध्यक्षमा गणेश केसीलाई उम्मेदवार बनाउने जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाको निर्णय
कागेस्वरी-मनोहरा ८ मा काग्रेस अधिबेशनमा वडा सभापतिमा पुडासैनी र चापागाईं भिडने ,चापागाईंको पल्ला भारी